Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): Warriors of the Rainbow: Seediq Bale
at 3/30/2014 10:57:00 AM
Warriors of the Rainbow: Seediq Bale Ndai sum la hkrung yu yu ga, An hte Kachin/Wunpawng,KIA myu tsaw ni mung ndai zawn Magrau grang ai Warriors Hpyen jau bu ni re hpe mu lu ai. Moi jiwoi jiwa prat kaw nna an hte gaw galoi mung n shayawm ai,N hting nut ai,English prat,Japan prat,moi chaloi nhkoi prat ding sa majan gasat ning tawn ai labau an hte Kachin kaw nga ai, Ndai sumla hkrung gaw an hte kachin myusha ni hte'' arawn lai len(character)'' hte grai bung ai, ''movie'' Taiwan Zin lawng na ''Jauman-native'' Myu baw sang ni gaw Japan Mung maden Gumsheng hpyen lusuk hpe gasat shagrawt kau ai sum la hkrung ''Movie ''re.Yu yu ga.
92/%ပြည် သူဆန္ဒသေနပ် နာဂစ် ဖွဲ စည်းပုံ ကာ ကွယ် ရေlး...
ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ သန်းခေါင်စာရင်း ...
Burmese ( Burma ) Myanmar-Army
2014 03 Press Release the Elders Myanmar s Grassro...
STATEMENT BY ARCHBISHOP CHARLES BO ON THE CENSUS P...
ငြိမ်းချမ်းရေး လင်းတကြီးများ ဝဲနေသည်
လူမဲ့လေယာဉ်သုံး၍ အင်တာနက် ရရှိ နိုင်
ပင်လုံစာချုပ်လက်မှတ် မထိုးခင်က ပြည်ထောင်စု ဆိုတဲ့ ...
Updated with recent violence and security issue in...
“ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု အားရစရာ မရှိသေးဘူး”
စစ်တွေ ပဋိပက္ခ မိန်းကလေးတဦး သေဆုံး
မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ကချင်ဒေသစစ်ဆင်ရေးမှာ ရဟတ်ယာဉ် ၂...
Why donors should insist the census be postponed
ဝ လူမျိုးဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဖြစ်
ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဘာတေးလ် လင့်တ်နာ ဝေဖန်
ကိုရီးယားမှ ဆုရရှိခဲ့သည် ကချင်မော်ဒယ်အောန်ဆိုင်းအာ...
KIA HTE MUNG SHAWA
Myen Asuya Dap KIA Du Jum Langai Hte Hpyen Ma Lang...
KIA အား အာဆီယံတွင် ပထမဆုံးစံပြအဖြစ်တိုက်ခိုက် ခြေမ...
Identity ( မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုက်ပွဲဟာ အိုင်ဒန်ဒတီ...
Gap hkat jahkring lekmat htu ngut jang Laknak lang...
Myit yu na lam,Tinang nan Tinang gasan san nna Mah...
ကိုထင်အောင်လင်း လိုင်ဇာသို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ခြေလျင်...
Kachin CSOs Statment on 2014 Census ( Khon ja shan...
သမ္မတဟာ ပြည်သူ့စကား နားထောင်ဖို့လိုကြောင်း DVB က ပြ...
Labau shang ai Rawt Malan Hkrun lam sumla
LAKNAK LANG RAWT MALAN WUHPUNG NI YAWNG GAHKYIN GU...
လူမျိုးပျောက်မှာ ပူစရာ မလုို၊ ပြည်နယ်ပျောက်မှာ အရင...
MATSAT SHABAT RE AI MYEN MYIT JASAT ''DAW4''
ONE Kachin ဆိုသည်မှာ ( ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး )
Frank L. Morris Jr Jinghpaw ni hpe Tsaw ra ai Lai...
လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်ဟာ ပြည်မအစိုးရအတွက် ကစားလို့ အကေ...
မြန်မာနိုင်ငံသည် အကောင်းဘက်သို့ ဦးတည်ခြင်းမရှိ
သန်းခေါင် စာရင်း ကိစ္စမှာ ဗမာခေါင်းဆောင်များ နုိုင်...
SHAT SHA HPAWNG GA’ANG KAW NA HKYI MAKAI
လာခီးလာ ညီလာခံသို့ တင်ပြသော အစိုးရ၏ တနိုင်ငံလုံး အ...
Junta Made Seccret dam deal
The February 2014 Burma Bulletin